चाडबाडको मुखैमा उर्लियो खसीको मासुको मूल्य, हेर्नुहोस किलोको कति ?
भारतबाट आयात रोकिएपछि खसीको मासुको मूल्य आकासिएको छ।आयात रोकिनेवित्तिकै हजार रुपैयाँबाट उकालो लागेको मासुको मूल्य अहिले किलोकै १३ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ।चाडबाड नजिकिदै गएपछि बजारमा खसीको मासुको माग बढ्न थालेको छ।
सामान्य समयमा किलोको १३ सय रुपैयाँ पुगेको खसीको मासुको मूल्य दशैंमा कति पुग्ला ? व्यवसायी भन्छन्द दशैंमा चाहिने खसीबोका नआए किलोकै १६ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ। दशैंको समयमा उपत्यकामा मात्र ५० हजार खसी माग हुन्छ। कलंकी खसी बजार संघका अध्यक्ष जनकराज खतिवडाले भारतबाट खसीबोका नआए मूल्य अझै आकासिने बताउँन्हुन्छ। उहाँका अनुसार अहिले गैरकानुनी बाटोबाट खसी भित्रिरहेको छ। दशैंको समयमा भारतबाट खसी नआए मूल्य जिउँदोनै ८ सय रुपैयाँ सम्म पुग्न सक्छ जिउँदो ८ सय पुगे मासुको मूल्य किलोकै १६ सय पुग्छ।
अहिले बजारमा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकेजी ५ सय ८० देखी ६ सय २० रहेको छ भने मासु किलोको १३ सय रुपैयाँ पुगेको छ। दशैं अघि ७ दिनमा मात्र उपत्यकामा ५० हजार खसीको आवश्यक पर्छ। खाद्य संस्थानले यो वर्षको दशैंका लागि ३ हजार खसीरच्याङग्रा उपत्यका ल्याउने भएको छ। खसी अभाव भएकै कारण कोटा भन्दा कम खसी आयात गरिएको संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले बताउनुभयो। उहाका अनुसार यो वर्ष ३ हजार खसीरच्याङग्रा ल्याउने तयारी संस्थानले गरेको छ।